XOLOITZCUINTLI EYGA MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Xoloitzcuintli Eyga Macluumaadka iyo Sawirada
Relic the Xoloitzcuintli markuu yahay 11 bilood jir— 'Kani waa Relic, koraya oo ku barbaaraya eeyga ugu cajiibka badan! Wuxuu bilaabay xirfadiisa ciyaareed wuxuuna kudhaqmayaa adeeca dhinaca. Waxaan u soo bandhignay carqaladeyn yar oo saameyn ku yeelan karta si aan ugu diyaarinno ka qeybgalkiisa ugu dambeyn ee cayaarahaas! Relic waxay leedahay tamar maalmo! Isagu ma joogsado ilaa 8PM marka ay la mid tahay in qof wax ku dhuftey shuruud oo uu isu beddeley wadar culeys culeys leh! '
Mexico Timo la'aan
Xolo wuxuu ku yimaadaa seddex cabbir: Toy, Guntin, Jaangooyo, iyo laba nooc: daboolan iyo timo la'aan, iyadoo timo la'aantu tahay tan loogu raadinta badan yahay. Waa mid aan timo lahayn leh ama aan lahayn timo gaaban oo madaxa iyo dabada ah. Xolo aan timo lahayn waa inuusan weligiis timo lahayn, ama uusan yeelan timo dheer, timo silig ah ama timo jilicsan. Maqaarkiisu waa inuu ahaadaa mid jilicsan oo jilicsan, hadana ku adkeynaya canaasiirta. Xolo wuxuu ku yimaadaa midabyo kala duwan, laga bilaabo madow ilaa midab, cawl, naxaas, bir, cas, fawn, adag ama dhibco leh. Noocyada dahaarka leh waa inay lahaadaan jaakad buuxda oo timo ah oo gaaban, jilicsan oo nadiif ah, sida tan Doberman oo leh cadayasho joogto ah waxay daadisaa wax aad u yar. Xolo dahaarka leh sidoo kale waa inuusan laheyn timo dhaadheer, silig ama timo ruxruxa. Waxay leedahay taageerayaal daacad u ah kuwa jecel taranka laakiin waxay doorbidaan jaakad timo eey ah. Celcelis ahaan qashin shan ah , afar waxay noqon doonaan bilaa timo midna waa la dahaadhaa. Tani waa nooc aad u adag oo adag, leh madax ballaaran iyo sanka midabkiisu midabkiisu yahay midab madow ama midab leh. Indhaha qaabeeya yicibta ayaa mugdi ah ama midab eyga leh. Astaamaha ugu muuqda ee la ogaan karo waa dhagaha waaweyn ee baalasha u eg oo aad u xiisa badan waana maqli karaa oo kaaga digi karaa qatar ama shisheeye. Xolos waxay badalaan midabada markay bislaadaan.
Xolo waa mid caqli badan, daacad ah, feejignaan leh, isboorti oo aad u jecel qoyskiisa. Waa muhiim in dhammaan xubnaha qoysku door ku yeeshaan hoggaaminta, barbaarinta, tababbarka iyo quudinta Xolo ama waxay ku xirnaan doontaa qofka ama dadka sameeya. Si dabiici ah ayey u difaacdaa ugana fogaataa shisheeyaha. Iyadoo habboon is dhexgalka bulshada waa wax aad ugu wanaagsan shirkadda iyo carruurta. Waa quraafaad in Xolos ay yihiin kuwa cuna khudradda, si kastaba ha noqotee waxay jecel yihiin khudaarta. Noocani waa u fududahay housetrain , oo si dhakhso leh ayuu wax u bartaa. Waa inaad ahaataa hogaamiye oo baro Xolo, ama waxay kuu horseedi doontaa oo guriga kuu maamuli doontaa. Noocani wuxuu noqonayaa mid aad caan u ah sida eey adeec ah, daaweyn, kacsanaan, iyo isku xirnaan. Kuwo badan ayaa ku dhaaranaya inay wax badan ka barteen Xolohooda marka loo eego nooc kasta oo kale, maxaa yeelay waa kuwo caqli badan oo la jaan qaada qoyskooda. Xolo waxaa badanaa loogu yeeraa eey Velcro ah, oo uu la joogo milkiilahiisa marwalba, marar dhif ah ayuu cararaa ama fogaadaa. Mid ka mid ah milkiilaha axdigi ayaa sheeganaya inay wacday oo ay ugu yeertay Xolo kaliya inay hoos eegto oo ay aragto inay fadhido meeshaas oo ay kor u eegeyso sidii inay dhahdo, 'waa i kan.' Markaa waxay si dhakhso leh u bartay inay si fudud hoos u eegto marka hore halkaasna way jiri doontaa. Milkiile kale ayaa sheeganeysa inay Xolo jeceshahay inay geedaha la fuusho caruurta oo ay fardaha la fuusho milkiilaha. Xolo ayaa wax kasta ka baxsan kara ama kori kara wax kasta oo kaliya si aad u gaadho meesha aad joogto. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay caqli badan yihiin waxay sidoo kale baran karaan inay joogaan halka aad rabto iyaga illaa inta aysan waligeed ahaanin. Ahaanshaha astaamo horumarsan oo leh xirfado badbaado oo aad u weyn, Xolo uma dulqaadan doono xadgudub ama deegaan aan xasilloonayn. Iyada oo aan la daadin, aan lahayn dander iyo boodada, noocyada aan timaha lahayn waxay caan ku yihiin dadka nadiifka ah, nadiifka ah, kuwa xasaasiyadda qaba iyo xiiqda, iyo dadka la il daran xanuunka iyo arthritis nooca cudurada. Iyagoo aan timo lahayn, waxay soo daayaan diirimaad diiran, dejiya, oo bogsiinaya. Tani waa sababta oo ah iyaga oo aan timo lahayn, oo aan haysan caqabad dhogorta, heer kulka jidhkoodu ma diiran yahay. Kani maaha yappy ama hyper hypers ee dhagayso markii ay Xolo kuu sheegaan. Ha u ogolaan Xolo inuu ku dhaco dhibane Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya halka eygu aaminsan yahay inuu yahay Hogaamiyaha u xir xir dadka . Tani waxay sababi doontaa heerar kala duwan arrimaha dhaqanka . Ha daaweynin eey sida aadanaha . Baro dareemo canine ah oo u daawee eeyga si waafaqsan, adigoon ilaawin waligaa-sidaas-muhiim ah socod baako maalinle ah . Waxaa lagugu abaalmarin doonaa marar badan adiga oo eey deggan, oo isku dheelitiran.
Xolo wuxuu ku yimaadaa seddex cabir, cabirka saxda ah wuxuu ku kala duwan yahay naadiga naadiyada ilaa kan naadiga, hase yeeshe guud ahaan tirada waa sida soo socota.
Jack Russell SUNTZU shih cross
Caruus: Dhererka 9 - 14 inji (23 - 36 cm) oo garabka ah.
adhijirka reer Jarmal ee malyuunka iskudhafka ah eeyaha
Cunto: Culeyska 5 - 15 rodol (2.3 - 6.8 kg) Mareykanka gudahiisa Xolo ugu yar waxaa lagu magacaabaa Toy Mexico dhexdeeda waxaa loogu yeeraa Guntin, taas oo jahwareer keeni karta.
Yar: Dhererka 15 - 20 inji (38 - 51 cm) oo garabka ah.
Ghadaab: Miisaanka 15 - 30 rodol (6.8 - 14 kg) Gudaha Mareykanka yar-yarta waxaa loogu yeeraa Guntin iyo Mexico waxaa loogu yeeraa Dhex-dhexaad.
Heer: Dhererka 20 - 30 inji (51 - 76 cm) oo garabka ah.
Heerka: Miisaanka 25 - 40 rodol (11 - 18 kg) iyo ilaa xitaa 60 + rodol (27 kg)
Xolo waa nooc aad u adag oo caafimaad leh oo aan lahayn walwal caafimaad oo la xiriira jinsiga. Soo saaraha sare ayaa sidaas ku sii hayn doona iyada oo taranta kaliya kuwa tijaabada ah ee leh sifooyinkaan caafimaad, maqaarka wanaagsan, dabeecada iyo isweydaarsiga. Bixiyuhu wuxuu ku dhashaa lacag oo aan ahayn caafimaadka iyo daryeelka noocaas waxaa laga yaabaa inuusan ka walaacsaneyn astaamahan caafimaad, isagoo ku tarmaya kaliya waxa ay gacanta ku hayaan ee ma ahan waxa ay tahay inuu sameeyo. Taranka waa mas'uuliyad aad u weyn oo ay leedahay fanjeer aad u heellan. Dhamaanteen waan ognahay waxa ku dhacay qaar badan oo ka mid ah noocyadeenii caanka ahaa waqtiyadii hore sidaa darteedna waxaan wada ognahay si ka wanaagsan sida loo tarmo ujeeddo kale oo aan ka ahayn caafimaadka iyo daryeelka dhammaystiran ee noocyadan aadka u dhif iyo naadir ah. Caafimaadka maqaarku aad ayuu muhiim ugu yahay noocyada timo la'aanta ah ee funaanadaha ku jira cimilada aadka u qabow ayaa lagula talinayaa. In kasta oo ay dad badani ka akhriyeen internetka, maqaarka Xolo aad ayuu u adag yahay wuxuuna u baahan yahay daryeel aad u yar. Xaqiiqdii qubayska badani wuxuu maqaarka ka xayuubin karaa ilaalinta dabiiciga ah, taasoo sababi karta waxyeello ka badan ta wanaagsan. Sidoo kale looshin xad-dhaaf ah iyo baaritaanka qorraxda ayaa xirmi kara daloolada waxayna dhaawici karaan maqaarka, waxayna sababi karaan finanka iyo wixii la mid ah. Marka kaliya maydh iyo looshin ama shaashadda qorraxda sida loogu baahan yahay. Ilaalinta dabiiciga ah ee Xolo ha u qabto shaqadeeda. Midab madow iyo midab adag oo loo yaqaan 'Xolos' ayaa leh maqaarka ugu dhib badan oo midabada khafiifka ah waxay u baahan yihiin taxaddar dheeraad ah: Eeg Qurxinta.
Wolf muqisho malamute for sale
Dhallinyarada Xolos waxay u baahan yihiin jimicsi badan, anshax iyo feejignaan, alaabooyin badan oo carruurtu ku ciyaarto iyo waxyaabo la sameeyo si looga dhigo kuwo faraxsan oo dhibaato ka baxsan. Haddii aadan haysan waqtiga loo baahan yahay sannadka ugu horreeya, waxaad tixgelin kartaa tababare, eeyaha ku lugeeya, ama xannaano maalmeedka eyga intaad shaqada ku jirto maalinta oo dhan. Ama Xolo da 'weyn. Markay bislaadaan, way isdajiyaan oo si dhibyar ayey u socdaan, xasilloonaan waayaan, waxayna ku qanacsan yihiin inay guriga joogaan intaad shaqeyneyso. Si kastaba ha noqotee, waxay doorbidi doonaan inay ku raacaan haddii ay awoodaan oo ay si fiican ula shaqeeyaan shaqada. Tani macnaheedu maaha inaysan ahayn ciyaar lagu boodo orod, tamashle ama waxqabad kale, waxay kaliya ka dhigan tahay inaysan u baahnayn sida, la yiraahdo, nooc shaqo ama nooc terrier.
Xolo ka yar ayaa loo weheliyay wehel ahaan iyo ka weyn ee Xolo si loo ilaaliyo. Si kasta oo aad Xolo u doorato, waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah . In kasta oo ciyaartu ay daryeeli karto waxyaabo badan oo ka yar jimicsiga Xolo, sida dhammaan noocyada kala duwan, ma buuxin doonto dareenkooda asaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Noocani waa mid aad u adag oo la jaan qaadaya qaab nololeedyo badan, maadaama uu ku yimaado cabirro badan baahi kasta. Dhammaan timaha aan timaha lahayn waa in laga ilaaliyaa qabow daran iyo kuleylka sidaad adigu naftaada u ilaalin lahayd, meel kasta oo aadamuhu joogo Xolos sidoo kale wuu noqon karaa, iyadoo la siinayo inay kula wada noolaan karaan guriga. Waxay sameystaan ​​eeyo aad u liita ama xayawaan guri joogta ah, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin inay ka mid noqdaan qoyska. Waxay si wanaagsan u tababaraan santuuqa oo xitaa waxay doorbidaan meel xasilloon oo fiican oo ay ugu yeeraan tooda dhowr saacadood maalintii ama habeenkii haddii aysan kula seexanayn sida badankood ay sameeyaan. Dad badan oo milkiileyaal ah ayaa tareen warqad ah ama sanduuqa qashinka ku tababara cabbirka yar ee Xolo, sidaa darteed uma baahna in lagu baxo cimilada daran ee xilliga qaboobaha. Si kastaba ha noqotee, marka cimiladu fiicantahay, qofna ma jecla banaanka sida Xolo ay jecel yihiin qorraxda oo ay ku qubeystaan ​​cimilada diiran.
Xolo waa nooc caafimaad oo aad u dheer noolaa. Qiyaastii 15 ilaa iyo 20 sano waa wax aad u badan.
Qiyaastii 3 ilaa 7 eyyo, celcelis ahaan 5
Dahaarka iyo timaha kala duwan ee loo yaqaan 'Xolo' waa kuwo aad u fudud in la xanaaneeyo oo la daryeelo. Kuwa aan timaha lahayn: Dhibaatooyinka maqaarka badankood waxay ka dhashaan taranka oo liita, dayaca ama qubayska xad dhaafka ah iyo dheecaanka xad-dhaafka ah, ka xayuubinta ilaalinta dabiiciga ah iyo daloolada daloolada. Timo badan oo aan timo lahayn Xolo waxay yeelan doontaa maqaar aad ufiican, jilicsan, hadana adag. Ku maydh maydh hal jeer ama laba jeer bishii, ama hadba sidii loogu baahdo. Qorrax madoobaad sidii loogu baahdo sidaad adigu naftaada ugu isticmaali laheyd cimilada qoraxdu aad u kulushahay. Kuma talinayno tan wax soo saar ah si maqaarku u fiicnaado, maadaama aad maanta ka akhrisan karto internetka. Alaabtu uma baahna inay qaali noqdaan. Milkiille ayaa ku andacoonaya inay ku iibsaneyso qubeyskeeda iyo alaabteeda xolo dukaanka dollarka guul weyn. Bixiyeyaasha ugu sareeya waxay kugula talinayaan badeecada aadanaha ee jilicsan ee hypoallergenic, qubeyska wanaagsan, kareemka la qalajiyo, looshinka iyo qorraxda. Si fudud u dhig. Waxyaabaha ugu caansan waa: Johnson oo sariirta ilmaha ku seexda iyo kareemka leh chamomile iyo lavender. Aad u dejiya oo u dejiya maqaarka oo ur fiican. Wixii jiilaalka tilmaamaha iyo cagaha qalalan ee jiilaalka: Bacda bacda ama subagga candho xoolo. Wixii finanka mararka qaarkood ama finanka, gaar ahaan dhalinyarada Xolos iyo in maqaarku jilco oo laga saaro maqaarka dhintay ayaa kor u kaca: St. Ives xoqida xoqida ama sheyga la midka ah. Ku nadiifi buunbuun buunbuun oo ku maydho baahi loo qabo, ka dibna kareemo leh shey iftiin wanaagsan oo hypoallergenic ah. Waxaa ku jira looshanno qurxoon oo ay ku jiraan muraayadda qorraxda. Ama kuwa ugu jecel waa Bullfrog ee carruurta. Dadka muujiya ama haddii aad qorsheyneyso dibedda oo aad dooneysid in Xolo-gaagu u ekaado sida ugu fiican: Saliida yicibta waa fiicantahay sidoo kale Palmers lagu buufiyo saliida waxay u fiican tahay maqaarka dhalaalaya ur fiicanna sidoo kale! Had iyo jeer maydh ka dib maalin ka dib goobta bandhigga ama baarkinka si aad uga saarto jeermiga aan loo baahnayn iyo / ama wasakhda iyo saliidda soo baxda. Inta udhaxeysa qubaysyada guriga, biyo raaci biyo diirran ayaa ugu fiican in lagu dhaqo wejiga iyo cagaha wasakhaysan biyo diirran iyo marada dharka lagu dhaqo. Wixii daahan ah: U maydh eeyga dahaarka leh sida aad u jeclaan lahayd nooc kasta oo dahaadhan, cadaya maalin kasta ama ugu yaraan toddobaadle si aad u sii daadiso daadinta. Labada noocba: Ciddiyaha jarista iyo caday ilkaha toddobaadle ah. In kasta oo midabada adag ee adag ayan gubin, waxaa caqli gal ah in qorax kasta laga ilaaliyo nooc kasta oo timo la'aan ah sidaan nafteena ugula dhaqmi lahayn cimilada kulul. Calaamadaha dhibcaha leh iyo kuwa cad ayaa sameyn kara oo sameyn kara qoraxdu hadaan la ilaalin. Noocyada aan timaha lahayn waxay ku habboon yihiin kuwa xasaasiyadda qaba sababtoo ah ma jiraan timo la daadiyo. Noocyada dahaarka leh, oo leh burush joogto ah, ayaa daadiya wax aad u yar.
Xoloitzcuintli, oo sidoo kale loo higgaadiyay Xoloitzcuintle, ayaa inta badan loo yaqaan 'Mexicoless Hairless' ama 'Xolo'. Waxay u egtahay Terrier adag oo Manchester ah. Xolo waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn uguna da'da yar adduunka, oo soo jiray 3,000 oo sano. Farshaxan iyo dhoobada dhoobada ee noocyadan qadiimiga ah ayaa laga helay qabriyada Colima, Mayan iyo Aztec Indian. Waxaa si aad ah loogu sharfay daacadnimadooda, sirdoonkooda, awooddooda daweynta iyo suugaanta. Xolo maanta ma ahan wax isbadal ah. Awoowayaasha Hindida Aztec waxay keeneen eeyo aan timo lahayn oo loo yaqaan 'Biche' (oo macnaheedu yahay qaawan) iyaga markay la yimaadeen Aasiya. Aztec waxay ku raaxaysteen eeyaha aan timaha lahayn sida xayawaannada, laakiin sidoo kale waxay u arkeen inay faa'iido u leeyihiin kululeeyaha sariirta, cuntada iyo qurbaannada allabariga. Kulaylka jirka ee diiran ee eeyda aan timaha lahayn ee caruurtu ku ciyaarto ayaa ka dhigtay dalab sida dhalooyin biya-kulul oo qadiimi ah, yareeya xanuunka caloosha iyo laabatooyinka laabatada, ama si fudud sariiraha lagu kululeeyo inta lagu jiro habeennada qabow. Qabow daran ayaa loo sameeyay 'Saddex Habeen Ey ah.' Tilmaamaha daweynta ee taranka ayaa weynaaday illaa iyo inta 'awooddeeda bogsashada' u noqotay daawo-dhan. Tirooyin dhoobo ah iyo hadhaagii eeyadan, oo jiray 300 illaa 900 AD, ayaa laga helay goobaha aaska, halkaas oo eeyaha ay ku hagaan nafaha nolosha aakhiro ee farxadda leh oo ay nafaqeeyaan illaa laga gaarayo. Xolo wuxuu ku dhashay Mexico wuxuuna ku baahsan yahay Koonfurta Ameerika. Waxaa loogu magac daray eeygii hore ee Xoloti. Dhamaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad, waxay noqotay gebi ahaanba eey wehel ah. Diirimaadka ka imanaya eeyadan ayaa wali lagu raaxeystaa maanta, gaar ahaan waayeelka. Xolo-gu hadda kuma jiro khatarta baabi'inta oo uusan khatar ugu jirin xiisaha dartiis. Xolo maanta waxaa loo aqoonsan yahay xiisaha sii kordhaya ee wehelnimadiisa, daacadnimadeeda, nadaafaddeeda iyo dabacsanaanta ay ku wada sameyn karto oo dhan! Waxay samaystaan ​​wehel wanaagsan, bandhig, firfircoonaan, adeecid, daaweyn iyo eeyo adeeg.
Heerka: FCI, NKC, CKC, APRI, DRA, NAPR, ACA
Ghadafi: FCI, NKC, CKC, APRI, DRA, NAPR, ACA Toy: AKC, CKC, NKC, CKC, APRI, ACR, DRA, NAPR, ACA
Xoloitzcuintle, Standard iyo Miniature wuxuu aqoonsaday AKC ilaa 1959, markii diiwaan gelin la'aan iyo soo bandhigid la'aan ay sababtay in la tuuro. Laga soo bilaabo 2005, AKC wuxuu qirey caannimada sii kordheysa ee noocyadan qadiimiga ah wuxuuna aqbalay inuu dib ugu soo celiyo diiwaanka keydka aasaasiga ah ee AKC. Bishii Janaayo 2007, noocani wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ku tartamo adeecida AKC, kacsanaanta, tijaabinta eeyga, raadinta, K-9 muwaadin wanaagsan oo si dhakhso leh u rajeynaya isbadal.
Blancho's Kothoga (AKA Relic) the Xoloitzcuintli as a 6 bilood jir— 'Kani waa wiilkayga, Relic! Wuxuu ku korayaa inuu noqdo ham oo kale! WUXUU GARAN YAHAY waqtiga ay tahay inuu cuno haddii aad habsaantana wuxuu kuu rogayaa DHAMMAAN ADIGU illaa aad siiso isaga! Wuxuu ka qalin jabiyay tababarka eeyaha oo wuxuu hadda ku jiraa 'akhlaaqda dhalinyarada' si uu u barto sida loo salaamo dadka iyadoon la boodin! Wuxuu ahaa mid aad uqurux badan taas oo aan caan ku aheyn nooca!
Blancho's Kothoga (AKA Relic) the Xoloitzcuintli as a 6 bilood jir
Xochitl the Xoloitzcuintle oo ah eey- 'Xochitl waa eey aad u diirran oo xiise leh. Waxaan ula jeedaa, macno ahaan maqaar diirran oo aad u sarreeya oo doonaya inuu barto wax walba. Way ku qaadatay tababarka guriga iyo socodka xadhig iyada oo wax yar oo aan dadaal ka jirin dhankeenna. Way ogtahay markaan ka fikirayno iyada. Way ogtahay goorta ay u baahan tahay inay annaga naga fikirto. Waxaan ugu yeernaa 'shisheeye' maxaa yeelay ma aha oo kaliya inay ka dhex muuqato dadka badan sidoo kale wax kale ma ahan sida dadka kale ee ku dhex jira. Waxay leedahay awoodo aad u gaar ah, waxay umuuqataa. Waxay iga caawisay kiis aad u dhib badan oo hurdo la'aan ah. Waxaan bartay Aztec-yada loo adeegsado eeyahaas sababo badan awgood midna waxay tahay awoodaha lagu bogsado ee hurdo la’aanta. Diirimaadka maqaarkeedu wuxuu kaloo ka caawiyaa yareynta xanuunka arthritis-ka ee ku soo booda waqti ka waqti. Wali wey yartahay waxa xiiso leh in laga fakaro sanadaha badan ee soo socda. Waqtigan xaadirka ah, farxad ayaan ka dheregsan nahay oo waxaan la kulannaa waayo-aragnimo la yaab leh iyada oo kula soo koraysa. Waxay noo ogolaaneysaa inaan daryeelo laakiin taasi micnaheedu maahan inay ku raaxeysaneyso biyaha .... hadana. (farta ayaa la saaray). '
eyga oo leh sanka casaanka
Xochitl the Xoloitzcuintle oo ah eey
'Mandrake wuu sii weynaanayaa, hadana wuxuu noqonayaa da'yar qurxoon oo dahaaran Xolo. Wuxuu bartay waxyaabo badan. Weli, waxaan dhibaato ku qabaa inaan baro isaga inuu yimaado taleefankayga, gaar ahaan markaan tagno baarkinka oo ay ku mashquuliyaan eeyo kale. Caadi ahaan waa inaan ceyrsadaa illaa aan ka qabto oo aan ku rito hoggaankiisa si aan gurigiisa ugu kaxeeyo. (Badanaa wuxuu u maleynayaa inaan ciyaarayo), noocan oo kale ah ayaa i walwal geliya, badanaa sababta oo ah halista gawaarida is dhaafsan u taagan tahay. Wuxuu jiraa 5 bilood sawirradan. '
Madeena Xolo dahaarka leh, sawir qadarin leh Camino Xoloitzcuintle
Relic the Xoloitzcuintli markuu yahay 1 1/2 sano jir— Toddobaadkan dhammaadkiisa Relic wuxuu kasbaday horyaalkiisii ​​AKC Champion (Ch. Blancho's Kothoga)! Si aad u yaab leh ayuu u bislaaday, marxaladdiisii ​​dhallinyarnimadu runtii way qallafsanayd, wuxuu soo maray aad iyo aad xukuma masraxa oo isagu hadda wuxuu u soo baxayaa dhinaca kale shaqo badan ka dib, isagoo ah nin aad isu dheellitiran oo qabow leh! Waxay dhahaan noocan waa riyo qaali ah ilaa iyo qaangaarnimadiisa, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku BADBAADIYO qofkasta oo leh dhalinyaro Xolo (ama eey kasta oo madax adag), fadlan HA JOOJIN! Eeyaha qaangaarka ah ayaa ah da'da ugu badan ee looga tago hoyga iyo samatabbixinta maxaa yeelay aad bay u adkaan kartaa, way ku riixayaan waxayna u muuqdaan inay iloobeen wax kasta oo ay soo barteen, laakiin haddii aad joogto ahaato, weydiiso caawimaad haddii ay kugu adkaato, waadna uga gudub eey aad u weyn oo aad inbadan u jeceshahay maxaa yeelay labadiinaba is fahmaan xitaa in ka badan intaad moodeysay inaad awoodid! '
Pupe, oo ah 2 bilood jir Xoloitzcuintli eey, Mexico City
Tani waa Rico Suave, 17 lbs. ee 'nekkid' doggie :)
Eeg tusaalooyin badan oo ah Xoloitzcuintli
Xoloitzcuintli Sawirada 1
Xoloitzcuintli Sawirada 2
tilmaamaha jarmalka gaaban ee puppy puppy
ey dibi Mareykan ah oo lagu qaso pitbull
iskudhafka shaybaarka jern bernard
sawirada xayawaanka jiirka